Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU oo Meela Kala Duwan Laga Xusayo Sanadguuradiisii – Melbourne iyo xerada Dhagaxley
Ururka OYSU oo Meela Kala Duwan Laga Xusayo Sanadguuradiisii – Melbourne iyo xerada Dhagaxley
Maalintan oo ah maalin kuwayn halganka ay shacabka Somaalida Ogadenia ee halganka hubaysan kula jira gumaysiga madow ee abasiiniya ayaa laga xusaa dacalada dunida oo dhan waxayna ururka OYSU kusoo bandhigaan waxqabadkoodii iyo hormarka ay ka sameeyeen goobaha ay ka shaqeeyaan. Waxaa kale oo ay kusoo bandhigaa howlo badan oo kusaabsan halganka ay hormuudka u tahay JWXO.
Ururka OYSU Melbourne ayaa maantaa ku qabtay munaasabad ku saabsan Sanadguuradii asaaskii Ururka Midowga Ardayda iyo Dhalinyarada Somalida Ogadenia iyo muxaadaro lagu taageerayo agoonta Somalida Ogadenia.
Muxadarada ayaa ku saabsanayd Bisha Barakaysan ee Ramadan iyo muhiimada diintana subaan ka shegtay u gargaarkaa Agoonta. Waxaa muxaadarada oo socotay mudo Hal saac ah soo jeediyey Sheikh Fatxi.
Muxadarada ka dib ayaa waxaa laguda galay warbixin uu soo jeediyay Halgame Muktar Ibraahim oo ah Gudoomiyaha OYSU faracaMelbourneoo ku saabsanayd sanadguuradii kasoo wareegtay asaaskii Ururka OYSU iyo inta farac uu Ururka ka koobanyahay, isagoo dulmaray halgame Mukhtar wax qabadka ururkaa OYSU 4tii sano u jiray.
Waxaa munasabada laga soo daayey wax qabadkii Ururka , ilaa June 2010-2014 oo runtii ladhihi karo waa guul u soohoyatay halganka Somalida Ogadenia.
Waxaa kaloo maalinnimadii Axada taariikhduna ay ku beegnayd 22/6/14 xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay xaflad balaadhan oo lagu maamusayay maalintii lamideeyay Ururuda Dhalinyarada Ogadenia lana qaatay magaca OYSU.
Xafladan lagu qabtay xerada Dhagaxlay oo ahayd mid si wayn loosoo qabanqaabiyay ayay kasoo qayb galeen guud ahaan xubnaha OYSU ee dhagaxley iyo xubno aad umadan oo katirsan faraca MIDNIMO ee kahowlgala xerada Dhagaxlay waxaa sidoo kale kasoo qayb galay xubno kasocday faracyada OYSU ee xeryaha Ifo iyo Xagardheere.
Xaflada ayaa bilaabatay abaare 2:00 duhurnimo waxaana sidii caadada ahayd lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uusoo jeediyay hogaanka arimaha diinta iyo dabagalka ee faraca MIDNIMO wuxuuna sheekhu dadkii xaflada kasoo qaybgalay xasuusiyay cabsida Allaah oo markasta iyo meelkasta loo baahanyahay in ay dadka muslimiinta ah xasuusnaadaan. Sheekha ayaa sidoo kale dhalintii iyo dadwaynihii goobta fadhiyay kubaraarujiyay in ay gutaan waajibaadka saran oo ah in ay ciidooda gaalada kaxoreeyaan sheekha ayaa sidoo kale xusay bisha ramaddaan ee fooda inagu soohaysa iyo sida loogu baahan yahay in diyaar garow wayn lasameeyo.
Intaas kadib waxaa lasiiamba qaaday qodobadii dhimanaa oo dhamaantood khuseeyay sanad guurada OYSU waxaana goobta laga akhriyay taariikh kooban oo ah taariikhda OYSU iyo waxqabadkii OYSU mudadii ay jirtay sidoo kale waxaa makarafoonka lagu soodhaweeyay wufuudii kasocotay xeryaha Ifo iyo Xagardheere oo hadalo qiiro leh madasha kasoojeediyay waxaa sidoo kale khudbad qiimabadan soojeediyay gudoomiyaha faraca MIDNIMO isagoo warbixin ay bulshadu u oomanaydna goobta kasoo jeediyay.
Intaas kadib waxaa madasha lagu soodhaweeyay kooxda hilaac ee kadhisan xirada Dhagaxlay oo soobandhigtay heeso iyo dhaanto aad u xiisabadnayd oo ay dadwaynuhu uwada istaageen
Guntii iyo gabagabadii xafladan oo uu daadihinayay xoghayah OYSU dhagaxlay MR. Musse ayaa kusoo dhamaatay guul iyo jawi dagan waxayna soogabagabowday xili ay goorsheegtu ahayd 5:00 galabnimo.